‘श्रीमानले कमाएको आम्दानी घरव्यवहारमा खर्चिएपनि मैले कमाएको आम्दानी बचत हुने गरेको छ। : गाडीवाली गंगा – नेपाली सूर्य
‘श्रीमानले कमाएको आम्दानी घरव्यवहारमा खर्चिएपनि मैले कमाएको आम्दानी बचत हुने गरेको छ। : गाडीवाली गंगा
January 11, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on ‘श्रीमानले कमाएको आम्दानी घरव्यवहारमा खर्चिएपनि मैले कमाएको आम्दानी बचत हुने गरेको छ। : गाडीवाली गंगा
‘श्रीमानले कमाएको आम्दानी घरव्यवहारमा खर्चिएपनि मैले कमाएको आम्दानी बचत हुने गरेको छ। दिनभरी श्रम गरेरै भएपनि जिन्दगी जसोतसो काटिरहेकै छौँ। सँगै छौं, खुसी छौं, यसैमा दिनभरीको थकान बिर्सिएकी छु,’ उनले स्टेयरिङमा कुहिनो टेकाउँदै भनिन्। onlinekhahar24 बाट
कसैलाई नपरोस यस्तो भखरै आयो दुखको खबर नानु को आत्माले सन्ती मिलोस
डा. केसी समर्थकको घोषणाः अबको नैतिक लडाइँ केपी ओलीविरुद्ध हुन्छ
‘रामचन्द्र पौडेलको च्याप्टर क्लोज ! आरजु थाकेकी छैनन्’
December 30, 2017 Nepali Surya
म मर्दैछु भनेर स्टाट्स लेखेका युवकको शव बाँस घारीमा यस्तो अबस्थामा भेटिएपछि… (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
March 20, 2019 Nepali Surya
‘शुभयात्रा नभनेको त्यो दिन, मनमा त्यही कुरा आइरहन्छ त्यही पश्चात्ताप छ’
March 11, 2019 Nepali Surya